जीवनशैली::Nepali News Portal from Nepal
कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि हिजोआज संसारभरीका मानिसहरुले स्वयंलाई क्वारेन्टाइनमा राखेका छन् । यस्तो अवस्थामा यदि तपाईंले आफ्नो पौष्टिक आहारमा परिर्वतन गर्नु भएन भने विभिन्न समस्याहरुको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ ।यो कुरालाई ध्यानमा राख्दै...
के हो ग्रिन टी ? कसरी बनाएर पिउने ?
५ हजार वर्ष पुरानो चिनिया प्राकृतिक उपचार पद्धतिको अध्ययन गर्दा, बिभिन्न ऋषिमुनी हरूद्वारा रचित प्राकृतिक उपचार तथा आयुर्वेदका पुस्तक हेर्दा त्यहाँ ‘ग्रिन टी’ लाई बिभिन्न रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । जापान र चिनमा परापूर्वकालदेखि...
हामीले भान्सामा प्रयोग गर्ने बिभिन्न खानेकुरालाई नियमित र मात्रा मिलाएर खाने हो भने शरीरमा रोगसंग लड्ने वृद्वि (रोगप्रतिरोधक क्षमता) गर्ने बिभिन्न औषधी खोज्न कतै जानै पर्दैन । रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने भन्नेबित्तिकै भिटामिन सप्लिमेन्टसेवनतिर...
मिर्गाैलादेखि यी राेगहरू निकाेपार्छ बेथेकाे सागले
बेथे दुई किसिमका हुन्छ । एक सामान्य हरियो पात भएको र अर्कौ रातो पात भएको हुन्छ ।यसको प्रयोगले विभिन्न रोगबाट मुक्ति मिल्छ । मिर्गौलाको पत्थरी निकाल्नका लागि बेथेको साग उपयोगी मानिन्छ ।यसका लागि आधा...
के हो आकस्मिक गर्भनिरोधक औषधि ?
असुरक्षित यौन सम्बन्धपछि गर्भ रहन नदिन आकस्मिक गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग गरिन्छ । आकस्मिक गर्भनिरोधकको प्रयोगशारीरिक सम्पर्क भएको पाँच दिनसम्म गर्न सकिन्छ, तर जति छिटो प्रयोगमा ल्याइयो, त्यति नै प्रभावकारी हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन ‘डब्लुएचओ’ ले आकस्मिक...
किन दुख्छ टाउको ? कस्तो दुखाइ हुन्छ जटिल ?
गर्धनदेखि माथि टाउकाको कुनै पनि भागमा महसुस गरिने दुखाइलाई टाउको दुखेको भनिन्छ। मस्तिष्क अर्थात् गिदीमा समवेदना शून्य (पेनरिक नहुनु) हुने हुँदा त्यो दुखे पनि हामीलाई महसुस हुँदैन। तर, वरिपरिका संरचनाहरू जस्तैः मस्तिष्कको आवरण, धमनी र...
जब बालबच्चा एक्लो बन्छन्
एउटा बच्चालाई हुर्काउन सजिलो हुन्छ । धेरै बच्चालाई दिनुपर्ने समय, गर्नुपर्ने खर्च एउटै बच्चाले प्राप्त गर्न सक्छन् । पढाईमा होस् वा खानपानमा समस्या हुँदैन । राम्रो शिक्षादिक्षा दिन र उनीहरुको सम्पूर्ण आवश्यक्ता पुरा गर्नका...
‘मेरो क्याम्पस जीवन सुरु भयो २०१७ सालमा । पोखरामा पिएन क्याम्पस खुलेको थाहा भयो र क्याम्पस पढ्न गएँ । म सो क्याम्पसको पहिलो विद्यार्थी हुँ । प्रमाणपत्र तह (आइ.ए.) तह खुलेको थियो । अंग्रेजी,...
जाडो मौसममै रुघाखोकीले किन बढी सताउँछ ?
सबैले थाहा पाएकै कुरा हो, जाडो मौसम बढ्दै गएपछि हामीलाई रुघाखोकीले सताउन थाल्छ । अरु बेला सामान्य अवस्थामा रहने हामीलाई जसै जाडो मौसम शुरु हुन्छ, नाक बग्ने, हाच्छिउँ आउने, खोकी लाग्ने जस्ता समस्याले सताउने...
काठमाडाैं,२३ पुस – क्यान्सरदेखि गिजाबाट रगत आउने लगायत थुप्रै राेगकाे समस्या समाधान र मुलाले औंषधिकाे काम गर्छ ।क्यान्सर जस्ता असाध्य रोगसँग लड्नु असम्भव मानिन्छ। मूलाको नियमित सेवनले क्यान्सरको जोखिम घटाउने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन्...